HomeTURKEYGobolka BanaadirCiidamada 52Maalgashiga lagu kordhinayo soo jiidashada Boztepe
13 / 01 / 2020 Ciidamada 52, GUUD, Gobolka Banaadir, TURKEY, TELPHER
maalgashiga si loo kordhiyo rafcaanka boztepen ayaa noola yimaada
Dawlada Hoose ee Magaalada Ordu waxay sii wadaysaa hirgelinta maalgashi kordhin doona soo jiidashada Boztepe. Baaxadda mashruucu wuxuu leeyahay, muwaadiniintu waxay ku raaxeysan doonaan Boztepe oo leh waddo lugeynaya dhagxaanta cagaarka ah, 27 unug iibsi, abaabul dhul daaqsimeed.
Qiyaastii 500 oo mitir oo u jirta cutubka iibka Boztepe'de ee Buffet iyo Mashruuca Diyaarinta Dhulka ayaa bilaabay dhismaha kooxaha, booqdayaasha si fudud ayey u daawan karaan muuqaalka magaalada Ordu waxayna siin doonaan aag ay ku iibsadaan alaabada maxalliga ah.
LAGUU SOO GALIN KARAA 600 METERS
Dawlada Hoose ee Magaalada, Boztepe, 7 mitir ballaadhkeed iyo 600 mitir dherer ah, oo hada loo isticmaalo wado wado, mashruucu wuxuu bilaabay qorsheynta aaggaga oo dhan. Meelaha lagu lugeeyo waxaa la sameyn doonaa aag shaqo, unugyo iib ah iyo qorsheynta dhul-gariirka ka dib marka buff-ka lagu adeego waxaa loo adeegsan doonaa muuqaal casri ah.
27 SALES UNITS OO LAGU CAAWIN KARO
Wajahadda mashruucan dhexdeeda, wadarta 27 cutub oo iib ah ayaa loogu talagalay iyadoo la go'aaminayo nooca naqshada naqshada naqshadaha ee loomska si aan caadi ahayn looga iibinayo aagga. Shaqada la qabtay, muwaadiniintu waxay ku raaxaystaan ​​Boztepe waxayna ku raaxaystaan ​​aag si fudud ay ugu lugeeyaan oo uga dukaameysan karaan taraafikada gawaarida.
"20 heerka ugu sareeya ee ganacsiga"
Xoghayaha guud ee dawlada hoose ee caasimada Coşkun Alp iyo kuxigeenka xoghayaha guud Bülent Şişman ayaa baaray howlaha goobta. Xoghayaha Guud Alp wuxuu yidhi, ından Muuqaal fidiyey ayaa ka xoog batay Boztepe, oo ka mid ah meelaha soo jiidashada ee Gobolka Badda Madoow. Looms hadda jira oo alaabada maxalliga ah lagu iibiyo waxay ku sugnaayeen meel ay ku taalo taraafikada gawaarida. Muwaadiniinteennu waxay rabeen aag laga bilaabo Boztepe halkaas oo ay si fudud u daawan karaan Ordu oo ay booqan karaan meelihii lagu iibin jiray alaabada maxalliga ah. Si loo soo afjaro jahwareerkaas, Madaxweynahayaga Dr. Waxaan halkan ka bilownay daraasad iyada oo la raacayo tilmaanta Mehmet Hilmi Güler. Mashruuca biyaha roobka iyo shaqooyinka dhagxaanta iyo duminta la taaban karo ayaa lagu dhammeystirey mashruucan. Hawlaha dhismaha ee birta ee kaabayaasha iibka ayaa la fuliyaa. Waxa oo dhan waa boqolkiiba 20. Waxaan sii wadaynaa inaan sare u qaadno soo jiidashada Boztepe-ka shaqada aan qabanno iyo waxaan qaban doonno
Tareenka Soma wuxuu kordhin doonaa soo jiidashada OSB
Mashruucyada Waddooyinka ee Nabadgelyada Nadaafadda ee Malatya
Boztepe 'Charm Will Grow oo maal-galin ah
2 ee Mashruuca Dayactirka Gaadiidka Dadweynaha ee Ordu. Marxaladda nolosha ayaa soo socota
Maalgashiga Suuqa Saadka waa in la kordhiyaa
Dagger ilaa laabta Boztepe
Duulimaadyada IZBAN ayaa sii ballaarin doonta tayada Torbalı
Tareenka Xawaaraha Sare wuxuu dhalin doonaa nolosha bulshada iyo dhaqaalaha Edirne
Taageerada dawladdu waxay kor u qaadi doontaa maalgelinta nidaamka tiknoolajiyada
Maalgashiga Indian Railways ayaa kordhinaya baahida birta
Mashruuca baabuurta telefishinka Artvin waxaa lagu hirgeliyaa Xafiiska Guddoomiyaha
Mashruuca Teleferka ee Inkum wuxuu tagaa Nolosha
Cutubyada Iibka Boztepe Buffet iyo Mashruuca Diyaarinta Muuqaalka